नेपाल संविधानको प्रयोगशाला, सात दशकमा सात वटा संविधान, २०७२ को झन विवादित| Corporate Nepal
असोज ३, २०७८ आइतबार १३:४८
काठमाडौं । अमेरिकाको संविधानको इतिहास २३२ बर्ष पूरानो छ । उक्त संविधान नेपालको अहिलेको संविधान जस्तो वृहत जस्तो पनि छैन् । सुरुमा जम्मा चार पृष्टको यो संविधानमा आठ वटा मात्रै धारा रहेका छन् । अमेरिकी संसदले आवश्यकताअनुसार हालसम्म २७ पटक संशोधन गरेर सोही संविधानबाट काम चलाउँदै आएको छ ।
तर नेपाल भने संविधानको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । बिगत सात दशकमा नेपालले सात वटा संविधान फेरिसकेको छ । विदेशी निकै धेरै चलखेल र हस्तक्षेप हुने नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरताका कारण विकासको अवसरबाट बन्चित हुनु परेको छ ।
नेपालमा राजनीति गर्ने दल र नेताले मुलुक र जनता संवृद्ध हुन दिने भन्दा पनि नयाँ नयाँ वादका नाममा राजनीति गर्ने, क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलन उठाउने र गरिव जनतामाथि शासन गर्ने काम गर्दै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले विशेषगरी पश्चिमाहरूले नेपाललाई स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि जान नदिन यहाँका दल, नेता, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै यहाँको मौलिक पद्दतीलाई भत्काउने र नयाँ नयाँ शासन प्रणाली, नयाँ नयाँ संविधान बनाउन लगाउने गरेको बताउने गरेका छन् । उनका अनुसार किन उनीहरूको संविधान सयौं बर्षसम्म फेर्नु पर्दैन् । हाम्रो पटक पटक किन फेरिन्छ ? यसको अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्छ ।
दुई पटकको संविधानसभा निर्माण गरेर २०७२ असोज ३ मा जारी गरिएको संविधान पनि अहिले निकै धेरै विवादित बन्न पुगेको छ । विदेशीको इशारा र लगानीमा अहिलेको संविधान आएको भन्दै यस क्षेत्रका धेरै जानकारहरूले तथ्य बाहिर ल्याएपछि सर्वसाधारण जनतामा संविधानप्रति आस्था कम हुँदै गएको छ । यही बेलामा दलका नेताहरूदेखि अदालतसम्मले संविधान मिचेर काम गर्न थालेसँगै २०७२ सालको संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने हो कि ? भन्ने चुनौति बढेर गएको छ । मधेसी, जनजातीका अधिकार सुचिश्चित गरिएको अहिलेको संविधानप्रति उनीहरू नै असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् भने अर्कोतर्फ बहुसंख्यक हिन्दु धर्माबलम्बी संविधानमा हिन्दु राज्य हटाएर धर्मनिरपेक्षता लेख्ने कुराबाट सशंकित बन्न पुगेका छन् । राजासहितको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने ठूलो जनसमुदाय अहिलेको संविधानप्रति पूर्णरुपमा असन्तुष्ट छन् । तीमध्येका कतिपय २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
आज संविधान दिवस बनाइरहँदा धेरै मानिसले यसलाई ‘कालो दिवस’को रुपमा मनाइरहेका छन् । दलका नेताले संविधान दिवसमा दिएका अभिव्यक्तिमा पनि संविधानको पालना हुन नसकेकाले यो संकटमा परेको औंल्याएका छन् ।
बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न देउवा सुदूरपश्चिमतर्फ लागे
जेठान काण्ड सेलाउन नपाउँदै सन्धी काण्ड हुन लागेको डा. केसीको खुलासा
शेरबहादुरले शेरबहादुरलाई १०० मा जम्मा १० नम्बर मात्रै दिए
यो सरकारले सय दिनमा काम नगर्ने तीन सय ठेकेदारलाई थुन्नुपर्ने थियो, तर थुनेनः भण्डारी
दल र नेता असफल भए, ‘राजा आउ’ भन्ने नारा झन बढ्दैछः दीक्षित
एमालेको प्रतिस्पर्धी काँग्रेस मात्रै हो, च्याँखे थाप्ने प्रचण्ड अबको चुनावबाट समाप्त हुन्छन्ः ओली